वीरगञ्ज मेयरका दाबेदार बसुरुद्दिन अ‍ंसारीको मेडिकल कलेजद्वारा विद्यार्थीहरुसँग अनैतिक १६ लाख माग - Yatra Daily
Home अर्थ वीरगञ्ज मेयरका दाबेदार बसुरुद्दिन अ‍ंसारीको मेडिकल कलेजद्वारा विद्यार्थीहरुसँग अनैतिक १६ लाख माग
वीरगञ्ज मेयरका दाबेदार बसुरुद्दिन अ‍ंसारीको मेडिकल कलेजद्वारा विद्यार्थीहरुसँग अनैतिक १६ लाख माग
वीरगन्ज २२ साउन वीरगञ्जस्थित नेशनल मेडिकल कलेजले आईओएमबाट एमडीको लागि दोस्रो मेरिट लिस्टमा नाम निकालेका विद्यार्थीहरुसँग थप रकम माग गर्दै भर्ना लिन अस्वीकार गरेको छ । वीरगञ्ज महानगरपालिकाको मेयर पदका दाबेदार बसुरुद्दिन अन्सारी यो कलेजका प्रबन्ध निर्देशक हुन् । उनी एमालेबाट मेयर पदकाे टिकटका दाबेदार हुुन् ।
कलेजले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले निर्धारण गरेको शूल्यक ३१ लाख बाहेक थप १६ लाख रकम विद्यार्थीसँग माग गरेको हो । त्रिविले एमडीको लागि अधिकतम शुल्क ३१ लाख रुपैयाँ लिन पाउने सीमा तोकेको छ ।
थप शुल्क माग गर्दै विद्यार्थीलाई भर्ना लिन अस्वीकार गर्नु त्रिविको नियम विपरीत हो । बढी शुल्क लिनु सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश विपरीत समेत हो । सर्वोच्चले साउन ५ गते मेरिट लिस्टको आधारमा भर्ना लिनुपर्ने र त्रिविले तोकेको शुल्कभन्दा बढी रकम कलेजले लिन नपाउने फैसला १३ दिनदेखि अनशनरत डा. गोविन्द केसीको एक प्रमुख मागमध्ये मेडिकल कलेजले विद्यार्थीहरुलाई मेरिटका आधारमा भर्ना लिनुपर्ने भन्ने पनि हो ।
दोस्रो मेरिट लिस्टमा नाम भएका ८ विद्यार्थीले शुक्रबार कलेज प्रशासनसँग भर्नाको लागि सम्पर्क गरे पनि उनीहरुलाई थप शुल्क नदिए भर्ना नलिने भन्दै फर्काइएको थियो ।
‘भर्ना हुन गएका हामी त्यसै काठमाडौं फर्कियौं, कलेजले थप १६ लाख मागेको छ’, दोस्रो मेरिट लिस्टमा नाम भएका एक विद्यार्थीले नाम नखुलाउने शर्तमा भने ।
उक्त १६ लाख रुपैयाँ कलेजले सामुदायिक शुल्क, खेलकुद, परीक्षा शुल्क, पुस्तकालय, तालिमजस्ता बिषयमा राखेर लिन खोजेको हो ।
पलिलो मेरिट लिस्टमा नाम निस्किएका विद्यार्थीहरु भर्ना नभएपछि आईओएमले वीरगञ्जस्थित नेशनल मेडिकल कलेजमा भर्नाको लागि दोस्रो मेरिट लिस्टबाट १७ जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो । आईओएसम बाहेक त्रिविमा एमडी/एमएस कार्यक्रम सञ्चालनको लागि वीरगञ्जस्थित नेशनल मेडिकल कलेज र भैरहवास्थित यूनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साईन्सले मात्रै आवद्धता लिएका छन् ।
असारमा आईओएमले मेरिटको आधारमा प्रथम सूची निकाल्दा दुवै कलेजले आफूले पहिल्यै विद्यार्थी भर्ना गरिसकेको भन्दै ती विद्यार्थीलाई भर्ना लिन अस्वीकार गरेका थिए । कलेजले भर्ना लिएका विद्यार्थीहरुबाट ८० लाख रुपैयाँसम्म असुलेका थिए । लगत्तै, आईओएमको चेतावनी र सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि दुवै कलेज मेरिट लिस्टमा भएका विद्यार्थीलाई भर्ना लिन तयार भएका थिए ।
मेरिटको आधारमा विद्यार्थी भर्ना लिंदा आफूलाई अन्याय हुने भन्दै यी कलेजमा पहिल्यै भर्ना भएका विद्यार्थीले हालेको रिट सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको थियो । सर्वोच्चको यी निर्णयले मेडिकल कलेजमा मेरिटको आधारमा भर्ना हुन विद्यार्थीलाई बाटो खोलिदिएको थियो ।
आईओएसमका डीन जगदीश प्रसाद अग्रवालले आफूलाई विद्यार्थीबाट बढी शुल्क मागेको बिषयमा कुनै उजूरी नआएपनि विद्यार्थीसँग तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिनु गैरकानुनी भएको बताए । ‘हामी घटनाबारे तत्काल छानबिन गर्छौ । मेरिट लिस्टमा भएका विद्यार्थीलाई तोकिएको शुल्क भित्रै भर्ना लिनुबाहेक मेडिकल कलेजसँग अन्य विकल्प छैन्’, उनले भने ।
नेशनल मेडिकल कलेजका प्रबन्ध निर्देशक अन्सारीले विभिन्न शीर्षकमा खर्चको लागि विद्यार्थीसँग थप शुल्क लिने गरिएको बताए । श्रोत कान्तिपुर वाट
Previous articleजीतपुरसिमराः समृद्ध महानगरका आधारहरु – डा. कृष्ण पौडेल
Next articleअजय द्धिवेदीले मेयरमा लड्न अनिच्छा देखाएपछि मेयरमा विजय सर्राफको चर्चा